काठमाडौं । अहिले सान्या, चीनमा भईरहेको मिस वल्र्डको ६८ औँ संस्करणमा सहभागी नेपाली सुन्दरी शृङ्खला हालसम्म सहभागी नेपाली सुन्दरीका दाँजोमा सफल देखिएकी छन् ।
सिद्धुको ‘आवाज हरायो', चिकित्सकहरुले दिए यस्तो चेतावनी
एजेन्सी । पछिल्लो समय चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहेका भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता नवोजित सिंह सिद्धको बोल्न नसक्ने भएका छन् । उनको आवाज सदाका लागि बन्द हुन सक्ने समेत आशंका गरिएको छ ।
फ्राइडे रिलिजः निःसन्तानको कथामा बनेको ‘प्रसाद’
काठमाडौं । विपिन कार्की र नम्राता श्रेष्ठ स्टार फिल्म ‘प्रसाद’ आजबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आएको छ । यो फिल्मले निःसन्तान दम्पतीको कथालाई पर्दामा प्रस्तुत गरेको छ । एकल रिलिज पाएको ‘प्रसाद’ले बुधबार राजधानीमा भएको प्रिमियरमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो ।
‘केदारनाथ’ रिभ्युः कहानी कमजोर तर साराको अभिनय दमदार !
काठमाडौं । अभिनेता सैफ अली खान र अमृता खानकी छोरी सारा अली खानको बलिउड डेब्यु सबैको पर्खाई विषय बनेको थियो । अब त्यस पर्खाईको समाप्त भएको छ । अभिषेक कपुरको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘केदारनाथ’मा अभिनेता सुशान्तको अपोजिट भुमिकामा सारा छन् । साराको डेब्यु फिल्म कस्तो बन्यो ?
कपिलको ‘द कपिल शर्मा शो’मा पहिलो गेष्ट बन्नेछन् सलमान खान !
नयाँ दिल्ली । कमेडी किङ्गको नामले चर्चित कपिल शर्मा पुनः एक पटक आफ्नो फ्यानहरुको मन जित्नका लागि तयार छन् । सोनी टिभीमा चाँडै कपिल शर्माको नयाँ शो ‘द कपिल शर्मा शो’ सुरु हुँदैछ ।
नेपाली सांगीतिक इतिहासकै अमर गायक : नारायण गाेपाल
यस डान्सरले लिइन् ‘सपना चौधरी’को स्थान ! भाइरल बन्दै डान्स भिडियो
एजेन्सी । अहिलेको समयमा हरियाणाकी डान्सर सपना चौधरी बिग बोसको घरमा छन् । यसरी सपना चौधरी बिग बोसको घरमा भएपनि उनी जस्तै अर्की एक डान्सर पनि छन्, जसको ठुम्काले सबै दर्शकहरु दिवानी बनिरहेका छन् ।
काठमाडौं । चीनको सान्यामा भइरहेको ‘मिस वल्र्ड २०१८’ प्रतियोगितामा श्रृंखला खतिवडाले दुई विधामा अवार्ड जितेकी छन् । सोमबार साँझ भएको घोषणामा श्रृंखलाले ‘मल्टिमिडिया अवार्ड’ र ‘व्युटी विथ पर्पज’ जितेकी हुन् ।